Manual နဲ့ Automatic မှာဘယ် Transmission ကားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲ? – AutoMyanmar
Manual နဲ့ Automatic မှာဘယ် Transmission ကားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲ?
ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ့် အချိန်မှာ Manual နဲ့ Auto ထဲက ဘယ် Transmission ကားအမျိုးအစားကိုဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတာ Option တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အဲ့လိုအခြေအနေမှာ ကိုယ့်ပုံစံက ဘယ် Transmission ကားအမျိုးစားနဲ့ပိုကိုက်လဲဆိုတာ သိရအောင် ဒီနေ့မှာ Maual နဲ့ Automatic transmission နှစ်ခုရဲ့ အားသာချက်၊ အားသာချက်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Automatic Transmissions ကတော့ Hydraulical ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး Transmissions ကထွက်လာတဲ့ စွမ်းအင်ကို အင်ဂျင်ဆီ Torque Converter နဲ့ကူးပြောင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Auto မှာဆိုရင် Gear ချိန်းတာတွေ မကြာခဏလုပ်စရာမလိုတဲ့အပြင် စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းလှတဲ့ Clutch pedal အကူးအပြောင်းအစား Break pedal နဲ့ Acceleration pedal ကိုသာအသုံးပြုရတာကြောင့် တော်တော်များများက လက်ရှိမှာ Auto Transmissions ကိုကြိုက်နှစ်သက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
– Auto Transmissions ဟာဆိုရင် Gear အကူးအပြောင်းကို အလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အင်ဂျင်စွမ်းအင်ကို ချွေတာပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ရဲ့ ကားလမ်းကြပ်တဲ့နေရာ/ လမ်းကြပ်နေတဲ့အချိန်တို့ဆို ဒီစွမ်းအင်ချွေတာပေးတဲ့အချက်က တော်တော်လေးကို သိသာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Auto Transmissions မှာက Clutch pedal တွေကို မကြာခဏပြောင်းလဲအသုံးပြုစရာမလိုတာကြောင့် Manual Transmissions တွေလောက် Maintenance လုပ်စရာလိုအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ (ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာက Manual Transmissions ကားမောင်းသူတွေလည်း သေသေချာချာမောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ရင် Auto Transmissions ကားတွေနဲ့ Maintenance လုပ်ရမယ့်အချိန်က အတူတူလောက်ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဆိုတော့ ဒီအချက်ကမောင်းနှင်သူနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။) ကားမောင်းသင်တဲ့အခါမှာလည်း Auto Transmissions ကားနဲ့သင်ရင် ခဏလေးနဲ့ တတ်မြောက်လွယ်ပါတယ်။
– Auto Transmissions ရဲ့အားနည်းချက်အစကတော့ စျေးနှုန်းပါပဲ။ Auto Transmissions ကားတွေဟာ Manual နဲ့ယှဉ်ရင်အမြဲကိုစျေးကြီးနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ Auto Transmissions ကားတွေရဲ့ Function ပိုင်းကအနည်းငယ်နက်နဲနေတာကြောင့် ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာလည်း စျေးကခိုက်နေတတ်ပါတယ်။ စျေးတွေက ခိုက်နေလို့ Maintainance ကာလက ခဏလေးကိုမထင်လိုက်ပါနဲ့၊ Maintainance ကာလကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာနေတတ်သေးပြန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Fuel consumption ပါ၊ သူက Gear အပြောင်းအလဲကို အလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာရာရောက်တယ်ဆိုပြီး အပေါ်က အားသာချက်ထဲမှာကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ဒီအချက်က အားနည်းချက်မှာလည်း ပါနေပြန်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလိုအလျှောက် Shifting လုပ်ပေးရတာကြောင့် စွမ်းအင်ကုန်တဲ့နှုန်းက မြန်ဆန်လှပါတယ်။ ပျှမ်းမျှကြည့်ရင် ပုံမှန် Auto Transmissions ကားတွေဟာ Manual ကားတွေထက်ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပြီး စွမ်းအင်ကုန်နှုန်းမြန်ဆန်လှတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Auto ကနေ Manual Transmissions ဘက်ကို ပြောင်းပြီး မောင်းချင်နေပြီလား? မပြောင်းခင် Manual ရဲ့အားသာချက်/ အားနည်းချက်တွေသိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
– မကြာခဏ Shifting လုပ်ရင်းမောင်းနေရတာကြောင့် တစ်ယောက်တည်းမောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ပျင်းမနေရတော့ အမှန်ပါပဲ။ ?) နောက်တစ်ခု စျေးနှုန်းပိုင်းပါ၊ Manual ကားတွေရဲ့ စျေးနှုန်းဟာ Auto Transmissions ကားတွေထက်စျေးပိုပြီးနည်းပါတယ်။ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့စျေးနှုန်းက နည်းနေသလို ကားကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာလည်း အခကြေးငွေက Auto Transmissions တွေနည်းနေသေးပြန်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်တာပြီးစီးမှုစောင့်ရတဲ့အချိန်ကလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။
နောက်တစ်ခုကတော့ Control ပိုင်းပါ။ Manual မှာက Auto Transmissions မှာလိုမျိုး Torque converter မျိုးမပါတာကြောင့် ဘရိတ်ပိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ရတာပိုမိုလွယ်ကူနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
– ပထမဉီးဆုံးက သင်ယူတဲ့အချိန်ပါ။ Manual နဲ့ကားမောင်းစသင်တဲ့လူဟာ Auto နဲ့စပြီးသင်တဲ့လူထက် ပိုပြီးတိုင်ပတ်ပါတယ်။ Shifting ပိုင်းတွေနဲ့ Clutch pedal အပိုင်းတွေမှာ တော်တော်လေးတိုင်ပတ်လှတဲ့အနေအထားမို့ တတ်မြောက်ဖို့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြာနေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။
နောက်တစ်ခုကတော့ တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာပါ၊ တောင်တက်တဲ့အခါမှာ ရပ်လိုက်၊ သွားလိုက်နဲ့ Shifting လုပ်ပြီးရုန်းကန်သွားနေရတာကြောင့် ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သလို အနည်းငယ်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Clutch pedal ကြောင့်ပါ၊ Manual ဖြစ်တဲ့အညီ Clutch pedal ကိုကိုယ်တိုင်အမြဲကစားနေရတာကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့ ခြေသလုံး အဆစ်ကိုက်ခဲမှုတွေရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာကတော့ Auto နဲ့ Manual Transmissions တို့ရဲ့ အားသာချက်/ အားနည်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘယ် Transmissions ဟာကိုယ်နဲ့ ပိုပြီးကိုက်ညီမလဲဆိုတာ သိသွားမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ Automyanmar မှယုံကြည်မိပါတယ်။